Kala-daadashada xayawaanka: muhiimadda ay leedahay websaydhka cunnada | Cusbooneysiinta Cagaaran
Gudaha shabakadda cuntada Waxaan ka heli noocyo kala duwan oo ka kooban sida ay hawlaha xayawaan kasta uu leeyahay. Waxaan haynaa heerar kala duwan oo ah websaydhka cuntada ee laga soo saaro soosaarayaasha aasaasiga ah, iyada oo loo marayo macaamiisha aasaasiga ah, kuwa sare iyo kuwa jaamacadaha, ilaa xaalufinaysa xoolaha. Maanta waxaan ka hadli doonnaa xayawaankan loo arko inay yihiin nooleyaal mas'uul ka ah ka faa'iideysiga qashinka noolaha kale.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan burburka xoolaha iyo kaalintooda iyo muhiimadda ay ku leeyihiin shabakadda cuntada.
1 Isku dheelitirka deegaanka
2 Shaqada xayawaanka baaba'aya
3 Xayawaanka gurguuranaya
4 Waxyaabihii dabiiciga ahaa
Isku dheelitirka deegaanka
Waa inaad ogaataa in nidaamyada deegaanka ay xukumaan mabda'a isu dheelitirka deegaanka. Tan macnaheedu waa sheyga iyo tamarta waxay kujiraan isdhaafsi isdaba-joog ah oo leh dheelitirka 0. Tan macnaheedu waa in isla shaygii laqaatay la abuuray iyo wixii aan loo badalin nooc tamar kale ah Sidaas darteed, xayawaanka dillaacaya ayaa door muhiim ah ka ciyaara xiritaanka goobaabka ay dheelitirka bey'adu ka kooban tahay. Xayawaanku isdabajooga waxaa laga helaa gudaha iyo dibaddaba. Iyaga ayaa mas'uul ka ah dib-u-warshadaynta kaarboon-laba ogsaydhka ay dhirtu markaa u isticmaali doonto sawir-gacmeedka.
Tani waa sida ay uga faa'iideystaan ​​qashinka noolaha kale si ay u ilaaliyaan isu dheelitirka deegaanka ee deegaanka. Nidaamku wuxuu bilaabmayaa marka xayawaan ama dhir uu dhinto. Wax yar oo kaladuwan oo xayawaannada kala-baxa ah ayaa kala baxa oo bilaaba inay muuqdaan kuwaasoo mas'uul ka ah inay cunaan waxa ka hadhay noolaha ama noolaha. Mar dambe, ka dib cabitaankan, walxo jir ahaaneed ayaa weli jira.
Ka soo horjeedda waxa sida caadiga ah loo fikiro, waa xubno aad muhiim ugu ah silsiladda cuntada. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waa xayawaanada masuulka ka ah soo afjarida meertada iyaga oo markale bilaabay wareeg cusub. Waa midka joojiya jiritaanka maaddada dabiiciga ah ee noolaha waana tan siinaysa arrin dabiici ah oo cusub dhirta si ay mar labaad ugu bilowdo wareegga iyada oo loo marayo sawir-qaadis.
Waan ognahay in xayawaannada kala daadanaya ay qabtaan shaqooyinka ka soo horjeedda kuwa ay qabtaan xayawaan soo saare. Iyada oo ay taasi jirto, way is dhammaystiraan midba midka kale si ay hawl muhiim ah uga qabtaan nidaamka deegaanka.
Shaqada xayawaanka baaba'aya
Hawlaha ugu muhiimsan ee ay ku leeyihiin nidaamyadan deegaanka ayaa ah inay sii daayaan alaabooyin kala duwan. Alaabtaan waxaa isticmaala xayawaan soo saare waxayna ka caawiyaan inay beddelaan wax kasta oo aan dabiici ahayn. Cufnaanta noocan ah waxaa lagu beddelay iyada oo ka dhigaysa mid dabiici ah. Markaynu hareeraheena eegno maalin kasta, waxaynu daawan karnaa xayawaannada kala geddisan ee kala daadanaya innagoo aan aqoon u lahayn shaqadooda iyo kaalintooda.
Caadi ahaan, xayawaannada kala-baxa ayaa loo qaybiyaa 4 kooxood: cayayaanka, bakteeriyada, fungi iyo qaswadayaasha. Markii aan ka hadlayno nidaamka deegaanka ee dabiiciga ah sida keynta, markaan maqalno erayga xayawaan duminaya, waxaan badiyaa ka fikirnaa qashin qubka. Xayawaanadan ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara burburka hadhaaga walxaha dabiiciga ee nidaamka deegaanka. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay ciyaaraan kaalintooda si nidaamka deegaanka uu ugu jiro dheelitirka bey'adda isdaba jooga ah. Aan aragno tusaalayaal qaar ka mid ah guryaha wax dumiya.
Blowflies: Cayayaankaas yar waxay quutaan xoolaha dhintay. Waxay qayb ka yihiin silsiladda cuntada tan iyo markii ay u adeegaan sidii cunno loogu talagalay xayawaannada kale sida shimbiraha iyo jiirka. Intaa waxaa sii dheer, waxay u rogtaa arrinta fecal-ka ee loo yaqaan 'organic'.
Caaro: iyagu waa mid ka mid ah xayawaanka ugu halista badan wareegga noolaha. Iyaga ayaa ah kuwa cuna cayayaanka ugu badan waxayna ka caawiyaan nidaaminta tirada dadka ku nool dabeecadda.
Lamid ah: Waxay kuxirantahay noocyada duqowda aan la macaamilno, waxay quudin kartaa caleemaha, ubaxa, miraha, iniinyaha iyo cayayaanka kale. Waxay sidoo kale quudiyaan xididdada qudhunka ah iyo cuntada, fangaska, iyo kuwo kale. Waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin qadarka cuntada ee taala meesha aad ku nooshahay.
Kaneecada: ku dhowaad qofna ma arko isticmaalka kaneecada tan iyo markii ay aad u dhib badan yihiin, gaar ahaan xagaaga. Si kastaba ha noqotee, kaneecadu waxay leedahay shaqo taas oo ah inay cunto ugu noqoto cayayaanka kale. Waxay cuntaa miraha iyo khudaarta oo cayayaanka badankood waxay ku qaataan noloshooda oo dhan iyagoo aan dhibin aadanaha. Dhibaatadu waxay tahay markay galaan nidaamyada deegaanka deegaanka.
Duqsiyada cagaaran: Iyaga ayaa ah kuwa masuulka ka ah cunista saxarada waddooyinka, cuntada, xoolaha iyo dhirta oo ku baaba'aysa.
Qudhaanjada: inta badan quraanjadu waxay u adeegtaa cunto xoolaha kale. Tusaale ahaan, waxaa jira xarunta fangaska ee masuulka ka ah qudhaanjada cudurka qabta si ay u dhintaan. Fangaska wuxuu ku tarmayaa meydkaaga iyo qarankiisa. Shimbiraha kala duwan waxay ku khaldamaan jirka cas ee qudhaanjada miraha ay cunaan. Hawsha kale ee qudhaanjada ayaa ah inay qaaddo xaar shimbiraha ka mid ah una gudbiso xayawaanka kale si ay u cunaan
Waxyaabihii dabiiciga ahaa
Aynu aragno waxa qudhmi kara ee laga helo deegaannada dabiiciga ah:
Gorgor: Waxay kuxirantahay noocyada gorgorka aan ka hadlayno, cunnadooda inta badan way kala duwan yihiin. Intooda badani waxay cunaan caloosha iyo hilibka xoolaha kale ee dhintay. Waxay ku badbaadaan mahadnaqa lafaha iyo meydadka laga helo jidka.
Tukaha: Iyaga ayaa mas'uul ka ah cunista qashinka cuntada ee aan dad ahayn. Waxay sidoo kale quudiyaan saxarada noocyada xoolaha qaarkood.
Wasakh: mid kale oo ka mid ah cayayaanka oo aan cidina u arkin isticmaalka nidaamka deegaanka. Waxay ku quudataa nektariga ubaxyada iyadoo marxaladdeedii ugu horreysay ay cunaan dirxiga. Inta noloshiisa ka hadhay wuxuu masuul ka yahay qabashada cayayaanka qaarkood, miraha dhacay iyo bakhtiga. Xayawaankani caadi ahaan dhib kuma qabaan aadanaha.
Libaaxyada: libaaxyada waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu sarreeya macaamiisha websaydhka cuntada, in kasta oo iyaguna loo aqoonsaday inay yihiin qaswadayaal. Kaliya masuul kama ahan inay soo qabtaan ugaarsiga nool, laakiin sidoo kale quudinta hadhaaga maydka iyo qashinka.
Caaryada biyaha: Waa nooc ka mid ah fangaska oo mas'uul ka ah inuu cuno dhammaan dhirta ku taal xaalad burburka.
Bakteeriyada Azotobacter: Waxay ku quudataa xididdada dhirta.
Bakteeriyada Pseudomonas: waa bakteeriyadaas masuulka ka ah cunista ubaxyada iyo xayawaanada dhintay oo ku jira xaalad burbursan. Waxay leeyihiin ficil daahirin oo waxaa lagu meeleeyaa heer sare oo muhiim ah websaydhka cuntada. Bakteeriyadaani badanaa kuma raaxeysato aadanaha, laakiin waxay mas'uul ka yihiin ilaalinta dheelitirka nidaamka deegaanka. Kaliya maahan inay mas'uul ka tahay kala-goynta walxaha dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxay mas'uul ka tahay nafaqeynta dhirta.
Waa in maanka lagu hayaa in xayawaanka kala daatay ay door aasaasi ah ka ciyaaraan dabeecadda. Meere aan xayawaankan lahayn waxaa ka buuxi lahaa meydad, qashin iyo cayayaan dhintay. Waxaas oo dhami waxay u keenayaan cudurro badan xayawaanka intiisa kale iyo aadamaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan xayawaanka burburaya iyo muhiimadda ay leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Kala daadinta xoolaha